Accueil > Gazetin'ny nosy > Tany Gasy: Olona miisa 4000 mahery no voasoloky
Tany Gasy: Olona miisa 4000 mahery no voasoloky
Nanomboka tamin’ny talata faha 21 novambra 2017 no nihetsika tetsy amin’ny tribonaly etsy Anosy ny fisolokiana mahakasika fivarotana tany ataon’ny fikambanana Tany Gasy. Nanomboka ny taona 2014 no milaza fa manana tanim-panjakana amidy ho fanatsarana ny fiainan’ny Malagasy ity fikambanana ity. Marihina fa tanim-panjakana no alain’izy ireo ary amidiny amin’ny olona izay te-hanana izany. Izany Ramangasoavina Herilanja Gérald izany no filohan’ity tambazotra goavana ity hoy ireo voasoloky tetsy Anosy omaly zoma faha 24 novambra 2017 raha nitafa tamin’ny mpanao gazety izy ireo. Ingahy Rakotonirina Fidel izany no voalazan’izy ireo fa mpikarakara ny taratasim-barotra. Ny eto Antananarivo dia Ambohimangakely, Alasora, Amboanjobe, Anjeva no nisy ny tany amidin’ity fikambanana Tany Gasy ity. Tonga hatrany amin’ny faritany izy ireo ka any Foulpointe sy any Mahajanga no efa anaovany ny asa fisolokiana avokoa, hoy hatrany ireo olona marobe nihaona tamin’ny mpanao gazety ireto.
Ny tena mahagaga dia ny ahazoan’ireto olona ireto ny titra momba ireo tany ireo, izay amin’arivony hektara raha atambatra. Tsy vitan’ny mampiahiahy ny fahazoan’ity fikambanana Tany Gasy ity ny titra amidin’izy ireo fa mbola isolokiany koa izany satria amidiny amin’olona telo na efatra ny ampahan-tany iray amin’izany. Nanomboka teo no nitranga ny raharaha teny amin’ny fitsarana satria samy niady ny ho tompon’ny tany ny mpividy ireo. Lasa any amin’ny fitsarana ny raharaha ankehitriny ka izao nahavoasambotra olona efatra avy ao amin’ny sampan-draharahan’ ny fananan-tany izao, dia ny sekretera iray sy mpiasam-panjakana roa hafa ary ny mpandrefitany iray.
Hatramin’izao nefa dia mbola tsy hita ireo tompon’andraikitra amin’ity fikambanana ity. Raha ny loharanom-baovao azo teny Anosy omaly tamin’ireo olona voakasikin’ny fisolokiana ity dia namidin’ny fikambanana amin’ny vahiny marôkanina koa ny tany ankehitriny ary efa vita ny taratasy momba izany. Raha ny voalaza amin’ny taratasy izay eny ampelatanan’ireto olona ireto dia izany Beny Gilbert André izany no nivarotan’ity fikambanana ity ny tany efa lasan’ireo Malagasy ireo.
Vola manapitrisany maro no nosolokiana amin’ny varotra tany ataon’ny fikambanana Tany Gasy. Mivoatra sy mahazo faka ny fisolokiana amin’izao fotoana izao. Mazava ho azy fa tsy hahavita izao samy irery ity fikambanana Tany Gasy ity fa tsy maintsy misy olona ao amin’ny fitondrana na ny mpitondra fanjakana ambony miaraka amin’izy ireo. Ho hitantsika ihany ny fivoaran’ity raharaha ity satria heverin’ireo olona voasoloky marobe ireo fa maro ny olona ao anatin’ity tambazotra amin’ny fisolokiana varotra tany ity ao amin’izao raharaha izao.
Marihina fa niorina tamin’ny 2014 ny fikambanana Tany Gasy, hoy ihany ny voakasika ny raharaha fa ny fivarotana tany nataon’ireo olona mpiandraikitra ny fikambanana dia efa tao alohan’izany.